Dangerous ways of sexual intercourse - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အိမ်ထောင်ရှင်စုံတွဲတွေရယ်ဖြစ်လာကြတဲ့အခါမှာ လိင်မှုရေးရာကိစ္စများနဲ့မကင်းနိုင်ကြတာ ဓမ္မတာပါပဲ။ ချစ်စိတ်တက်လာတဲ့အခါမှာ ပုံမှန်ထက်လွန်ကဲတဲ့ ချစ်ရေးချစ်ရာနည်းလမ်းများကို စဉ်းစားမိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအခါမှာ သာမန်လှေကြီးထိုးရိုးရိုးမဟုတ်တဲ့ ချစ်နည်းအချို့ရဲ့ အန္တရာယ်ရှိပုံကိုတင်ပြပေးလိုပါတယ်။
၁. ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း (Oral Sex)
ပါးစပ်၊လျှာတို့ကိုအသုံးပြုပြီး အမျိုးသားရဲ့လိင်တံ၊ အမျိုးသမီးရဲ့မိန်းမကိုယ်၊ စအိုဝ စသည်တို့ကို တို့ထိလှုံ့ဆော်ကာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။ ဒီအခါမှာ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ (Sexually Transmitted Diseases) များဖြစ်တဲ့ ဂနို၊ ဆစ်ဖလစ်နှင့် အခြားကာလသားရောဂါပိုးများ ကူးစက်နိုင်ခြေပိုများတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပါးစပ်မှာအနာရှိသူများပိုမိုကူးစက်နိုင်ပြီး လည်ချောင်းအထိ ပျံ့နှံ့ကာဝေဒနာခံစားရနိုင်ချေရှိပါတယ်။
၂. အနောက်ပေါက်ကြိုက်သူတွေ (Anal Sex)
အချို့သူတွေဟာ စအိုမှတဆင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှရရှိတဲ့သာယာမှုကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတွက် အနောက်ပေါက်တံခါးကိုခေါက်ပြီးတိုးဝင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီအခါမှာ စအိုဟာ အမျိုးသမီးအင်္ဂါလိုမျိုး စိုစွတ်တဲ့လိင်ရည်ကြည်လေးများ မရှိတဲ့အတွက်ချောမွေ့မှုမရှိဘဲ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ စုတ်ပြဲနာကျင်မှု၊ သွေးထွက်ခြင်း၊ လိပ်ခေါင်းဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
၃. အရုပ်ချစ်သူ (Sex Toys)
ကျွန်တော်တစ်ခါဖော်ပြခဲ့ဖူးသလိုပါပဲ။ လူကြီးဆော့တဲ့အရုပ်တွေဟာ အာသာဖြေရာမှာအလွန်အသုံးဝင်ပေမယ့် သန့်ရှင်းစွာပြန်လည်ဆေးကြောပြီးအသုံးမပြုဘူးဆိုရင် ပိုးများကပ်တွယ်ပြီး ဆီးပိုးဝင်ခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါပွန်းပဲ့ခြင်း၊ မျှဝေသုံးစွဲပါက လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ ဖြစ်ပွားခြင်း စသည်တို့ကိုကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
၄. ဝမ်းဝမ်းဖိုက်ရတာပျင်းသူတွေ ( Threesome/ foursome)
အပျော်တွေလွန်ကဲပြီး လူစုကာ အချစ်ကိုတစ်ပြိုင်နက်အတူတကွ သုံးဆောင်ကြသူတွေအတွက်ကတော့ ဆက်ဆံဖော်များလေလေ အန္တရာယ်ပိုများလေလေပါပဲ။ ဘယ်သူ့မှာဘာရောဂါရှိတယ်ဆိုတာ နဖူးမှာစာကပ်ထားသလိုမြင်သာတာမဟုတ်တဲ့အတွက် အပျော်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ အပျက်တွေကပ်ပါလာမှာစိုးရိမ်စရာပါ။
ဒါကြောင့် တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုသလို အေဒင်ဥယျာဉ်ရဲ့ပန်းသီးကို ပိုးထိုးခြင်းကင်းဝေးစွာနဲ့ ကျန်းကျန်းမာမာစားသုံးနိုင်ကြစေဖို့ ဗဟုသုတမျှဝေလိုက်ပါတယ်။